Muuri News Network » Dowlada Imaaraadka oo Shirqoolo Halis ah u Maleegeysa Somalia iyo Jabuuti
Dowlada Imaaraadka oo Shirqoolo Halis ah u Maleegeysa Somalia iyo Jabuuti
Xog gaara oo ay heleyso Wakaalada Muurinew.com ayaa sheegeysa in Dowlada Soomaaliya looga digay shirqool Imaaraadka Carabta uu u wado Soomaaliya iyo Jabuuti.
Diblumaasiyiin ayaa Dowlada Federaalka Soomaaliya u sheegay in Imaaraadka uu maalgalinayo qorshe Ra’iisul wasaaraha Itoobiya loosoo dhiibay kaasoo gabi ahaanba Soomaaliya iyo Jabuuti lagala wareegayo ilaha Dhaqaalaha iyo Hogaanka Madaxda oo rag taabacsan dowladahaasi dalka ay maamulaayaan.
Dibumaasiyiinta waxay sheegeen in Dowlada Jabuuti laga yaabo in dagaal lagu furo iyadoo loo adeegsanayo Eritrea oo hada Ciidamada joogay xaduuda Itoobiya soo dhoobtay xadka Jabuuti.
Heshiiska dhex maray Itoobiya iyo Eritrea wuxuu culeys ku noqonayaa Jabuuti oo dagaal kala dhaxeeyo Eritrea, waxaana suurta gal in khal khal siyaasadeed marka hore la geliyo Soomaaliya iyo Jabuuti.
Ra’iisul wasaare Abiy Axmed waxaa ka go’an inuu Bariga Afrika la wareego, isagoo wadamada awooda leh la yeelanaya xiriir ganacsi oo wanaagsan halka dalalka sida Soomaaliya oo kale ah uu doonayo inay siyaasada ay u meeriyaan lagu dhaqo.
Imaaraadka ayaa ujeeedka ay qorshahan Soomaaliya iyo Jabuuti ay u maleegeyso lagu sheegay inay dooneyso la wareegida dekadaha dalalkaasi iyadoo Itoobiyana ay sidaas oo kale u baahan tahay dekado ay wax kasoo dajisato kana dhoofiso waxyaabaha ay caalamka geyso.
Si kastaba ha ahaatee waxaa jira guluf colaadeed oo saameyn xoogan ku yeelanaya sanadaha soo socda Soomaaliya hadii Madaxda dalka aysan kaga hortagin siyaasad degan oo dalka iyo dadka lagu badbaadin karo.